Zinedine Zidane Oo Bishan Mari Doona Tijaabo Adag Oo Si Dhab Ah Loo Qiimayn Doono Iyo Garoon Ayna Madrid Kulamo Badan Ku Guulaysan Oo Qayb Ka Ah. - Gool24.Net
Zinedine Zidane Oo Bishan Mari Doona Tijaabo Adag Oo Si Dhab Ah Loo Qiimayn Doono Iyo Garoon Ayna Madrid Kulamo Badan Ku Guulaysan Oo Qayb Ka Ah.
Zinedine Zidane ayaa inta lagu jiro kulamada caalamiga ah ka sii shaqaynaya sidii uu ku xalin lahaa dhibaatada kooxdiisa Real Madrid ee ay ku soo jirtay intii ka horaysay fasaxa kulamada xulalka qaramada aduunka.
Laakiin Zinedine Zidane ayaa bishan September mari doona tijaabooyin adag oo lagu ogaan doono ilaa heerka ay kooxdiisa Madrid gaadhsiisan tahay kadib waqtiyo adag oo ka soo bilawday xili ciyaareedkii la soo dhaafay oo ay Los Blancos soo martay.
Real Madrid ayaa booqan doonta garoomo dhib badan isla markaana ay tahay in Zinedine Zidane uu halka ugu saraysa ku sii shaqeeyo haddii uu doonayo in uu xaliyo dhibaatada kooxdiisa Madrid.
Real Madrid waxay sabtida la ciyaari doontaa kooxda Levante, waana kulan aan wal wal badan ku hayn Zidane laakiin kadib waxay Real Madrid isla todobaadka soo socda booqan doontaa kooxda PSG ee kulanka furitaanka heerka groupyada Champions League.
Iyada oo aan Real Madrid waqti badan ka soo wareegin kulanka PSG waxay booqan doonaan garoonka dhibta badan ee Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan halkaas oo ay ugu tagi doonaan kooxda Sevilla oo dhibaato badan ku soo abuurtay Los Blancos sanadihii ugu danbeeyay.
Real Madrid wax guul ah kumay gaadhin garoonka Sevilla ee Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan tan iyo xili ciyaareedkii 2014/2015 kii waxaana arintan ka sii xun in Madrid ay soo guuldaraysatay afartii kulan ee ugu danbeeyay ee ay Sevilla marti u soo noqotay.
Kulanka Real Madrid iyo Sevilla waxaa la ciyaari doonaa Semptember 22 waana afar maalmood kadib kulanka PSG laakiin isla September 28 waxay Real Madrid booqan doontaa kooxda sida wayn isku soo hubaysay ee Atletico Madrid.
Kulanka Madrid Derby ee kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid waxa uu ka qabsoomi doonaa garoonka Estadio Wanda Metropolitano halkaas oo noqon doonta goob kale oo uu Zidane imtixaan ku mari doono.
Sidaa daraadeed, saddexda kulan ee PSG, Sevilla iyo Atletico Madrid oo ah saddex kulan oo xidhiidh ah waxay muujin karaan awooda ciyaareed ee xili ciyaareedkan laga filan karo Madrid iyada oo waliba uu Zidane ku rajo wayn yahay in uu Eden Hazard kooxdiisa dib ugu heli doono.